Tandremo, ry Aterineto, Manana Ny Polisin’ny Aterineto Azy Manokana i Okraina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Oktobra 2015 5:30 GMT
Nomena andraikitra hiaro ny firenena sy ny olom-pirenena manoloana ireo hetsika tsy manjary atao amin'ny aterineto ilay polisy vaovao hisahana ny aterineto Okrainiana, ary andrandraina hahavita tsara noho ireo teo alohany. Sary an'i Ruslan Stepanov ho an'ny Demotix. Sary nafangaron'i Tetyana Lokot.
Hasongadin'ny laharan'ny fampiharana lalàna ao Okraina ato ho ato ny sampana iray natao hisorohana ny fandrahonana atao amin'ny aterineto ary hisambotra ireo mpanao heloka ety anatin'ny tontolon'ny fampitàm-baovao. Nambaran'ny minisitry ny atitany ao amin'ny firenena, Arsen Avakov, tao amin'ny pejiny Faceboook ilay vaovao ary nolazainy fa manomboka amin'ny 15 Oktobra 2015 no mety hanekena ny fangatahana voalohany hirotsaka ho ao anatin'ilay “polisin'ny habaka”.
ITY NO POLISY VAOVAO HO ANAO.
POLISIN'NY HABAKA—FIAROVANA HO ANAO AO ANATIN'NY TONTOLO VIRTOALY SY NA AIZA NA AIZA!
Amin'izao fotoana izao, satria mampiasa aterineto sy izay zavatra rehetra atolony isika, azonao atao ny mila vonjy amin'ilay polisy, ary eo noho eo.
Ho an'i Avakov, ny tanjona namoronana ilay polisin'ny habaka ao anatin'ny Ministeran'ny Atitany dia mba handehanana lavidavitra kokoa amin'ny fanavaozana sy ny fampiroboroboana ilay andrim-panjakana, amin'ny fitondràna ho ao anatiny ireo matianina manana ny fahaizamanao amin'ilay asa fisorohana sy fiadiana amin'ny heloka bevava atao anaty aterineto. Ny fampiasàna ny teknolojia vaovao sy fanomezana fiofanana sahaza, hoy i Avakov, dia hahafahana mamadika ilay polisin'ny habaka ho lasa hery maoderina iray hanakanana ireo fandrahonana eo amin'ny sehatry ny teknolojian'ny fampitambaovao sy ny fifandraisandavitra, toy ireo tambajotra mpanao heloka bevava maro rantsana manerana ny firenana, mifanaraka amin'ny fenitra erantany.
Nolazain'ny minisitra fa tsy maintsy hiatrika ireo heloka bevava mahazatra anaty aterineto sy dizitaly ilay polisy vaovao ho an'ny habaka, tafiditra amin'izany ny hetsika miafina, ny fangalarana vola eny amin'ireo milina fitsinjaràna, ny fijirihana karatra fisintonana vola, ny fisandohana ny mombamomba ny olona iray, ny fanadiovana vola maloto ety anaty aterineto, ny fifampizaràna tenimiafina, ny malware ary hatramin'ireo heloka bevava tsy dia hita mivantana loatra toy ny fikirakiràna ny injenieria sosialy. Hita ao anatin'ny traikefa takiana amin'ireo “cybercops” ny fahaizana miteny tsy mihambahamba ny fiteny Okrainiana sy Anglisy, ny fahasalamàna ara-batana, fahalalàna betsaka amin'ny resaka lalàna momba ny heloka bevava sy ny iraisampirenena momba ny heloka bevava atao anaty aterineto sy ny resaka fiarovana anaty aterineto.
Tsy maintsy hiatrika famerenana manamarina ny fahaizany ho entiny manatevina ny laharan'ilay polisy vaovao hisahana ny habaka ireo andiany sy manamboninahitra ao anatin'ny Ministeran'ny Atitany. Tsy maintsy mahazo fampitaovana feno alohan'ny 5 Novambra 2015 ity andiany vaovao mpiady amin'ny heloka bevava atao amin'ny aterineto ity, hoy ny fanambaràn'i Avakov.
Ampahany amin'ny fanavaozana midadasika hatao amin'ny polisy ity hetsika fametrahana ny polisin'ny habaka ity, fanavaozana izay nahitàna ireo endrika polisy lahy sy vavy vaovao manao fisafoana any amin'ireo faritra ao Okraina, ho fanafoanana ihany koa ny kolikoly ao anatin'ny laharan'ireo mpampihatra lalàna. Hatreto aloha dia miabo ny ankamaroan'ny fomba nandraisan'ny olom-pirenena ilay hery vaovaon'ny polisy, mangetaheta ny hamongotra ilay fiheverana efa lalim-pàka nanjo ilay fampiharana lalàna fahiny niendrika ‘milisy’.